भद्रपुरमा किन बनेन झोलुंगे पुल ? - BirtaJyoti
झापा । मुलुकमा चारजना प्रधानमन्त्री फेरिए पनि झापाको भद्रपुर नगरपालिका–३ स्थित मेचीपारिबासीको वर्षाैंदेखिको सपना अझै पूरा भएको छैन ।
गाउँमा बिजुली आए पनि पुल नबन्दा उनीहरूको पीडा जस्ताको त्यस्तै छ । भारतीय भूमिसँग जोडिएको मेची नदीपारि टापु आकारको सानो गाउँलाई भद्रपुरसँग जोड्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा एउटा योजना अघि सारेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता सम्हालेको सरकारले मेचीपारिबासीको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मेची नदीमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो ।
नदीमा झोलुंगे पुल बन्ने दशकौँदेखिको सपना पूरा हुन लागेपछि मेचीपारिका १ सय ४० घर परिवारमा खुसियाली छायो । तर, मेचीपारिबासीको खुसीयालीलाई निर्माण कम्पनीले ग्रहण लगाइदिएका छन् ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले २०७२ असोज ११ गते एक भव्य समारोहका बीच पुलको शिलान्यास गर्दै समयमा काम सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई जानकारी गराए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसक्दा स्थानीयमा फेरि निराशा छाएको छ ।
निर्माण कम्पनीले १८ महिनामा सक्नुपर्ने झोलुंगे पुलको काम २८ महिनामा पनि सकेको छैन । ठेकेदारले निर्माणकार्य अलपत्र छाडेर बेपत्ता बनेपछि अहिले स्थानीय नदी तर्न बाध्य छन् ।
हिउँदमा त नदी तर्दा समस्या छैन । तर, बर्खाको तीन महिना स्थानीयको आवतजावत नै ठप्प हुन्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको बजेटबाट यो पुल बन्न लागेको हो ।
भ्याटसहित दुई करोड ८५ लाख ९८ हजार २५९ रुपैयाँमा नीलगिरी सेवा प्रा.लि. बानेश्वर काठमाडौँले २०७२ भदौ ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२८० मिटर लामो र १३ मिटर चौडाइसहितको यस पुलको निर्माण कार्य १८ महिना अर्थात् २०७३ फागुन ६ गते सम्पन्न हुनेगरी निर्माण व्यवसायी युवराज डाँगीले ठेक्का लिएका थिए ।
तोकिएको समय अवधि सकिएर १० महिना बढी भइसकेको छ । अहिले निर्माणस्थलमा एउटा टहरामा दुई चार जना कामदार बस्दै आएका छन् ।
दुईवटा पिलरको काम अधुरो छाडिदिएका छन् । पुलको लागि ल्याएका सामग्री खिया लाग्न र सिमेन्ट डल्लो पर्न थालिसकेको छ । तर, ठेकेदारको अत्तोपत्तो छैन । यसतर्फ झापाका सम्बन्धित निकायले समेत बेवास्ता गरेकोप्रति स्थानीयले गुनासो पोख्न थालेका छन् ।
भारतीय ट्रकका कारण नेपाली ट्रक मारमा
भारतीय मालबाहक ट्रकहरुले नेपालको सीमाबाट १५ किलोमिटर भित्रसम्म मात्र पस्न पाउने कानुनी प्रावधान उल्लघङ्न गरेको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले आपत्ति ... Read More
बिर्ताज्योती- March 21, 2019
काठमाडौं । पश्चिम रुकुममा आफ्नै छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले सानेभेरी गाउँपालिकाबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । ३४ वर्षीया ती व्यक्तिले डर, त्रास, धम्की दिँदै ... Read More
बिर्तामोड । झापा बिर्तामोड ६ काली मन्दिरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले टक्कर दिँदा तीनजना घाइते भएका छन् । मे ६ प ८५३८ ... Read More
नेपाल भारत मैत्री संघको पाँचौं मैत्रीसभा हुने